Ny Tanàndehibe Shiliana Fahatelo Nahazo WiFi Maimaim-poana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2017 18:18 GMT
(Marihina fa tamin'ny 22 Septambra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Any amin'ny Faritra Maule, faritanin'i Curicó no misy an'i Molina.
Manana Wi-Fi maimaim-poana ho an'ny olom-pirenena ankehitriny ny kianja lehibe ao Molina. Izany no tanàndehibe fahatelo ao Chili ahitana Wi-Fi maimaim-poana, Salamanca sy Puerto Montt ireo tanandehibe roa hafa araka ny nazavain'ny Plataforma Urbana (ES) tao amin'ny lahatsoratra iray momba ny fiantraikan'ny tambajotra maimaim-poana ao amin'ny kaominina:
Even this small city, with more or less a population of 30,000, is strongly focusing on tourism, being visited by hundreds of foreign tourist every year that visit the attractive mountains and vineyards of the area. Probably the possibility of getting a free internet connection will be another factor that will promote tourism in the region.
Mifantoka tanteraka amin'ny fizahan-tany ity tanàna kely ity izay manana mponina eo ho eo amin'ny 30.000 eo ho eo ary mpizaha tany vahiny an-jatony isan-taona no mitsidika ny tendrombohitra tsara tarehy sy ny tanim-boaloboka ao amin'ny faritra. Angamba mety ho lafiny iray hafa hampiroborobo ny fizahantany ao amin'ny faritra ny fahafahana miditra amin'ny aterineto maimaim-poana.
Nanoratra momba ity fivoarana vaovao ity ny El Maule [ES], bilaogy iray ahitana ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena:
This initiative is very important because Maule has one of the lowest internet connectivity rates in the country. This initiative opens the doors to the world that is unexplored for teens and kids that now will have the chance to learn about other cultures and societies.
Tena zava-dehibe ity hetsika ity, satria i Maule no iray amin'ireo vitsy indrindra miditra aterineto ato amin'ny firenena. Manokatra ny varavarana ho an'ny tanora sy ny ankizy hahafantatra izao tontolo izao ity hetsika ity ary afaka hianatra momba ny kolontsaina sy ny fiarahamonina hafa izy ireo ankehitriny .
Anisan'ny tetikasan'ny orinasa mpandray andraikitra ara-tsosialy ao amin'ny orinasan'ny fifandraisandavitra, Entel ity hetsika ity.